Iimpawu, ukutya, ibhayoloji kunye neminqweno yomongikazi ukrebe | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngokrebe ongenabungozi ebantwini nangona ubonakala. Imalunga nayo umongikazi ukrebe. Igama layo lenzululwazi ngu Isifo secirratum seGinglymostoma kwaye luhlobo oluzolileyo. Inxalenye yosapho lweGinglymostomatidae, apho iisampulu zifumaneka kubunzulu bolwandle apho ukukhanya kunqabile kakhulu kwaye iimeko zokuphila zinzima. Eyona nto inomdla ngesi silwanyana kukuba sinomlomo omncinci kunabo bonke ookrebe.
Kweli nqaku siza kuxela yonke ibhayoloji, indlela oziphatha ngayo, ukondla nokuzala kwakhona kukrebe.
4 Ukondla nokuzala kwakhona kukrebe okrelekrele
5 Umongikazi ukrebe ukwazi
Umongikazi ukrebe umalunga neemitha ezine ubude. Sisilwanyana esinemikhwa yasebusuku kwaye sihlala siphumle elwandle emiqolombeni emini. Umzuzwana apho itya khona kusebusuku xa iyokuzingela. Ngokungafaniyo nookrebe abaqhelekileyo, umongikazi ukrebe unomlomo omncinci kakhulu. Banombala omnyama ngaphezulu okanye ngokungafaniyo kwaye ezinye iisampulu zinamachaphaza.
Ngokubanzi, kunokubonwa ukuba ityebile kakhulu. Njengoko besesitshilo ngaphambili, sisilwanyana esingenabungozi nangona sibonakala. Nangona kunjalo, inokuhlasela ukuba iziva icatshukiswa sisilwanyana okanye ngumntu. Xa ziluma, Basebenzisa imihlathi yabo ukuwavala ngokuqinileyo kwaye kufuneka banyanzelwe nzima kakhulu ukuvula kwakhona. Ukuba ufuna ukuzama ukukhupha into ayityayo umongikazi ukrebe yinto engenakwenzeka.
Into enayo ngokufanayo nabanye ookrebe kukuba ine-gill slits engatyhilelwanga kwaye ayinayo i-bladder bladder. Le nyani ihlawulwa ngokuba ne-buoyancy ephezulu kwisibindi sakho. Esi sibindi sikhulu ngokungaqhelekanga kwaye sityebe kakhulu kwioyile.
I-nurse shark inoluhlu olufumaneka kwiilwandle ezishushu. Umqondiso wokuba ezi ndawo zizintandokazi zakhe kukuba banobukho obuphezulu kunxweme loMbindi Merika. Ngaphandle kwesi sizathu, indawo yabo yokuhambisa ivaliwe kwezi ndawo, kodwa banabela nakwimimandla esemantla njengeNew York. Apho kukho ookrebe abangakumbi abangabongikazi kwihlabathi lijikeleze ilizwekazi laseMelika kulwandlekazi lwePasifiki nolweAtlantic.
Ngokubhekisele kwindawo yayo Singayifumana kubunzulu beemitha ezingama-70 nakwindawo enesanti nodaka.
Nangona ibonakala yoyikisa, i-nurse shark ayinaburhalarhume konke konke ngaphandle kokuba iziva isoyikiswa okanye ihlasela indawo yayo yokuhlala. Umzekelo, kuye kwakho iimeko ezithile apho umlomo wakhe ubuvalwe ngocoselelo kwaye ukuze uwuvule, kuye kwasetyenziswa i-titanium forceps kwaye usebenzise amandla amaninzi. Azinabungozi kuba kwezinye ii-aquariums ezinye iisampulu zisetyenzisiwe ukuze iindwendwe zikwazi ukukhwela kuzo. Utyekelo abanalo ekuziphatheni alunamdla.
Ukondla nokuzala kwakhona kukrebe okrelekrele
Ngokuqinisekileyo abaninzi bayazibuza ukuba ezi krebe zinokutya njani ukuba umlomo wabo mncinci kunabanye. Ukunciphisa le meko, ukrebe usebenzisa indlela yokondla equka ukufunxa ii-crustaceans kunye ne-mollusks ukuze kamva uzityumze ngamazinyo agobileyo kwaye abukhali. Ezi mollusks kunye nee-crustaceans zenza uninzi lokutya kukanesi kukrebe.
Banokondla ezinye iikhukhamba kunye neembatyisi abazifumanayo ngelixa zihamba ebusuku.
Ngokubhekisele ekuvelisweni kwayo, iyafana nolunye udidi lookrebe. Ukudibana kwabo kunye nokuchumisa kungaphakathi. Kule meko sinenzalo ye-ovoviviparous. Oko kukuthi, iimazi ziyakwazi ukugcina amaqanda ngaphakathi kwaye iimbumba zizondla ngesondlo ngasinye esinokubonelelwa ngumama.
Ukuze isenzo sokumanyana senzeke kufuneka senziwe emanzini angenzulu. Kulwakhiwo ngalunye banakho ukuvelisa phakathi kwama-21 nama-28 amancinci. Ukusukela oko abantwana bohlulwa kunina, kufuneka bazimele geqe. Ukufunda ukuzifuya ngokwakho kubaluleke kakhulu ukuba ufuna ukukhula kunye nokuphila kwiimeko ezilungileyo. Kuqhelekile kwiintsuku zokuqala ezimbalwa emva kokuzalwa ukubona isimilo sokudla abantu ngenjongo yokuphelisa indlala yabo ekhulayo kunye nenkanuko yegazi.
Umongikazi ukrebe ukwazi
Phakathi kwezinto ezibangela umdla zokrebe, sinokubona ukuba, nangona isisilwanyana esinoxolo kwaye singenabungozi, yindawo enkulu kakhulu. Iyakwazi ukuhlala kwindawo ethile ukuya kuthi ga kwiminyaka emine. Ngamanye amaxesha kunokubonwa ukwenza ngobundlobongela kwezinye iintlobo okanye abanye abantu abasondela kummandla abahlala kuwo. Nje ukuba amthande, uzelwe, ukuba akahambi kude kunina yedwa kwisithuba seveki, uya kuba ngumama ngokwakhe ophela esitya.
Bayakwazi ukuziva igazi lezinye izilwanyana ukusuka ngaphezulu kweekhilomitha ezintlanu kude. Kuxhomekeka kuhlobo lwamaza olwandle ngelo xesha, lo mgama unokuba mkhulu ngakumbi.
Ukuba luhlobo olungenabungozi ebantwini, luchazwa njengolusongelayo. Inani lookrebe abazingelwa ngokungekho semthethweni ngenxa yesi sifo sikhulu kakhulu. Ityala elikhethekileyo elenziwa nge-15 kaJuni ka-2009 labangela ukuba imibutho yamalungelo ezilwanyana ihlaziswe yiyo. Kule meko, bekukho ukuthunyelwa kwezikhongozeli ezingama-20 zeemitha ezilishumi elinambini ubude ezishiya izibuko laseYucatan lisiya eSpain. Le mpahla yathunyelwa ngamapolisa kwaye kwafunyaniswa ukuba izaliswe ngookrebe abanomkhenkce ngaphakathi. Okubi kunabo bonke, Kukuba ngaphakathi ngaphakathi kukakrebe ongumkhenkce kukho malunga ne-200 kg yecocaine.
Iingcali zithi ukuzingela okukhulu kwezi zilwanyana kunokubangela iingxaki ezinkulu kwizinto eziphilayo zaselwandle. Oku kungenxa yeempembelelo eziveliswa zizilwanyana kwikhonkco lokutya.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nenesi shark.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Umongikazi ukrebe